» प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्न किन ढिलाई ?
प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्न किन ढिलाई ?
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार १५:१८
हेटौंडा । प्रदेश सरकार र संसद गठन भएको डेढ वर्ष नाघिसक्यो । प्रदेशका १३ वटा जिल्लावासीको तातोको बिषय भनेको प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले तोकिन्छ भन्ने हो । प्रदेशका सांसदहरु पनि संसद बैठक चलेर बिशेष समय र सुन्य समय पाउनु हुँदैन प्रदेशको नाम र राजधानीको कुरा चर्किएर उठाउँछन् । तर, डेढ वर्ष देखि जताततै कुरा उठ्छ तर, तोक्न भने ढिलाई भईरहेको छ ।
प्रदेशको राजधानी तोक्नका लागि जती माग गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रदेश ३ मा नेकपाका सांसदको दुईतिहाई छ । तर, दुईदिन अगाढीको संसद बैठकमा नेकपा प्रदेश ३ का इन्चार्ज समेत रहनुभएकी अस्टलक्ष्मी शाक्य नाम र राजधानी चाहियो भनेर उल्टै संसदमा उर्लनुहुन्छ ।
पार्टीका सांसदलाई मिलाएर, नाम र राजधानी तोक्ने प्रमुख दायित्व उहाँकै हुन आउँछ । तर, त्यो काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश कुरेर वस्नु भएको छ । राजधानी हेटौंडामानै स्थायीत्व दिनेकी अन्यत्र सार्ने भन्ने वहस सरकार र संसद गठन भएदेखिनै चल्दै आएको छ । चोक चौतारा, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यही वहस चल्छ । तर, दुईअध्यक्षको ग्रिन सिग्नल नपाउँदा सम्म सभामुख र मुख्यमन्त्रीले राजधानी तोक्न तत्काल लागिहाल्नुहुने छैन ।